Dhagaysiga dacwada muran-badeedka u dhaxeeya Somalia iyo Kenya ayaa mar kale lagu balamay bisha lixaad sanadka 2020. Kenya waxay ku doodaysaa in xadkeedu uu barbarro la yahay loolka (dhulbaraha = 0). Taasi oo u suurtogalinaysa Kenya inay sheegato dhul-badeed baaxad leh, horayna u siisay ruqsadii ama shatiyadi baaritaanka macdanta iyo shidaalka shirkado shidaal sida Anadarko Petroleum (USA), Eni (Italy), iyo Statoil (Norwey). Somaliya waxay ku doodaysaa in xadka u fidsan yahay dhanka koonfur-Bari kuna dhararsan xadkeeda dhulka ay la wadaagto Kenya. Soomaliya iyo Kenya inta la ogyahay waxay ahaayeen daris, muran-badeedka u dhaxeeya wuxuu ku beegmay xili soo saar shidaal ka biloowday badwaynta hindiya gaar ahaan Tanzania iyo Mozampique.
Dr. Ahmed Ali Yusuf waa Kabiir ku taqasusay culuunta shidaalka iyo soo saaridiisa. Degan Magaalada Houston, Texas, USA. Mudo badana u shaqaynayay Shirkadaha waawayn ee Shidaalka ee wadanka Maraykanka. Waxaad kala xiriiri kartaa: [email protected]